Ciidamadda Burundi oo laga saarayo somaaliya – Radio Daljir
Ciidamadda Burundi oo laga saarayo somaaliya
Febraayo 21, 2019 8:30 b 0
Burundi ayaa maanta oo khamiis ah bilaabeysa in qeybtii u horeysay ee ciidankeeda ku sugan Gobolka Shabeellaha Dhexe la soo baxdo sida qorshaha ahaa, kaddib go’aankii Midowga Afrika ee ahaa in dhamaadka bishan kun askari oo Burundi ka socda laga soo saaro Soomaaliya.
Lix maalin gudahood ayaa looga doonayaa dowladda Burundi inay Soomaaliya uga saarto 1,000 askari, iyadoo mudada ay heystaan ay tahay inta laga gaarayo ugu danbeyn 26-ka bishan.
Ciidamada Burundi ayaa soo faarujin doona degmada Cadale, Raage Ceelle iyo deegaanka Xaaji Cale oo ay muddo sanado ah fariisimo ku lahaayeen.
Dowladda Burundi ayaa ka soo horjeestay in Ciidamadooda kaliya laga soo saaro Soomaaliya, taasoo ay ku tilmaamtay in aanay cadaalad aheyn, waxaana ay dalbatay in kunka askari loo qeybiyo dalalka Ciidamada ka jooga Soomaaliya, si isku mid ahna looga dhimo.
Wargeyska New Vision ee ka soo baxa Dalka Uganda ayaa qoray in Burundi ay Soomaaliya uga geeriyootay 800 ilaa 1,000 askari, kuwaasoo magdhaw ahaan loo siiyay lacag gaareysa $18 Milyan oo dollar ah.
Tirada askarta Burundi ee ku sugan Soomaaliya ayaa lagu sheegay 5,432 askari, kuwaasoo dalkan ka howlgalayay in ka badan 10 sano.
Ciidankii u horeeyay ee Burundi ka socda oo soo caga dhigtay Muqdisho ayaa waxay yimaadeen bishii November sanadkii 2007, waana dowladda 2aad ee Ciidamo u soo dirtay Soomaaliya, waxaana ka horeysay dalka Uganda oo ciidankeedii u horeeyay Soomaaliya ay yimaadeen bishii March 2007.
Alshabaab iyo ciidamadda dowladda oo ku dagalamay Balcad
MARTISOOR: Xasan Jabhad iyo waayihiisii Jabhadda Xoreynta Soomaali Galbeed (WSLF) iyo wacyiga maanta iyo Jigjiga (dhegayso)